Imfundo esemgangathweni kunye nomsebenzi ofanelekileyo kubalulekile kubo bonke abantu. Uninzi lwabantu alukwazi ukwenza iinjongo zazo zemfundo minyaka le. KwiSciherherb, siyayixabisa imfundo kwaye sinikezela ngexabiso kubafundi bethu abahlola ilizwe le-crypto ngqo ukusuka kwinduduzo yekhaya lakho. Abaxhasi bethu babandakanya iinjineli ze-blockchain zangempela zehlabathi ezisebenza ngokusebenzayo neeprojekthi zebhlokhi ephezulu.
Siyavuya ukwazisa ubuchule bethu bokuqala "beSayensiherb Scholarship" ukunceda abafundi bafezekise ezona njongo zabo ziphambili zemfundo. Imali eyi-1000 yeedola yokufunda iya kunikwa umfundi (1) ngeendleko zemfundo zabo. Ngaphaya koko, injongo yethu kukuphinda-phinda esi sixa senkqubo kunyaka olandelayo.
Imali yokufunda yi- $ 1000 kwaye iya kunikwa umfundi omnye ngeendleko zemfundo zabo. I-Scholarship yimfundo kuphela kwaye iya kuthunyelwa kwi-ofisi yezezimali. Isifundiswa asihlaziywanga.
Sifuna ukunceda umfundi oswele kakhulu imali yezifundo zabo. Bobabini aBafundi beZidanga zabafundi kunye nabafundi abasaDanga lesiSeko banokufaka isicelo senkqubo yokufunda, ukuba babhalise kwinkqubo yesidanga ngokusisigxina kwikholeji eyamkelweyo okanye isikolo esiphumelele.
Ungasifaka njani isicelo seScholarship?
Ukufaka isicelo sobuchule kulula. Senze ngabom inkqubo yokwenza isicelo ilula kakhulu ukuze linani elivisayo kuphela labafundi abanokufaka isicelo. Mnye kuphela ophumeleleyo oya kukhethwa.
Bhala isincoko samagama angama-500+ ngesihloko esithi "Yonke into ofuna ukuyazi malunga neMo yendalo" ngokujonga kwakhona ikhosi enye okanye ezingaphezulu kwi-intanethi ozithathileyo kunye nendlela izifundo (izifundo) ezinokukunceda ngayo uphuhlise izakhono zakho. Kuya kufuneka ungenise isincoko sakho ngomhla okanye ngaphambi kwe-30 kaJuni, 2020.
Zonke izicelo kufuneka zithunyelwe [Imeyile ikhuselwe] kwifomathi yegama kusetyenziswa kuphela i-imeyile yakho yezifundo (idilesi ye-imeyile ye-Edu). IiPDF okanye ikhonkco kuGoogle kuXwebhu azizukuvunywa.
Kuya kufuneka uchaze igama lakho elipheleleyo, igama lakho eyunivesithi, inombolo yefowuni, kunye nedilesi ye-imeyile kwisicelo semfundo.
Qiniseka ukuba isincoko sakho sahlukile, siyile kwaye sinika ixabiso eliyinyani labafundi.
I-Plagiarism ayizukunyamezelwa, kwaye ukuba sifumanise ukuba ukope inqaku elivela komnye umthombo ke isicelo sakho siyakwakhatywa kwangoko.
Akufanele ubonelele nangolunye ulwazi ngaphandle kwaleyo ikhankanywe ngasentla.
Emva komhla wokugqibela wesicelo, iqela lethu liya kugweba isincoko sakho kubuchule, ixabiso osinike lona, ​​kunye nokucinga kwalo.
Abaphumeleleyo bazakwaziswa nge-15 kaJulayi, 2020waye ophumeleleyo uya kwaziswa nge-imeyile.
Ziza kujongwa njani izicelo?
Iqela lethu liya kujongisisa ngesandla inqaku ngalinye / isicelo esingenisiweyo kunye nokunxibelelana nomntu ophumeleleyo nge-imeyile ungekadluli umhla we-15 kaJulayi, 2020.
Umgaqo-nkqubo wabucala weScholarship
PHAWULA: Umgaqo-nkqubo wabucala weSciherbb wabucala kuzo zonke iifom zokufakwa kwezicelo zokufunda uqinisekisa ukuba ulwazi lobuqu aluyi kwabelwana ngalo kwaye lolwethu kuphela. Akukho lwazi luqokelelwe ngexesha lale nkqubo liza kunikwa amaqela e-3, kodwa iSciherherb.com inelungelo lokusebenzisa amanqaku angenisiweyo njengoko sinqwenela. Ngokuthumela ungeno kwiSciherherb Scholarship, udlulisela onke amalungelo kunye nobunini besiqulatho esingeniswe kwiScienceherb.com, nokuba ungenile wakhethwa ukuba uphumelele. I-Scienceherb.com inelungelo lokushicilela umsebenzi ongenisiweyo ekupheleni kwexesha lokungena nangayiphi na indlela i-Scienceherb.com ibona kufanelekile.
Ophumeleleyo uya kuqinisekiswa KUPHELA emva kokubonelela ngobungqina bokubhaliswa ngohlobo lwekopi yokufunda, umfanekiso wesazisi sangoku, isemthethweni okanye uxwebhu olungekho emthethweni, okanye ileta yobungqina evela kwikholeji eyaziwayo, eyunivesithi, okanye isikolo ophumeleleyo ubhalisiwe. Kwimeko apho ophumeleleyo engangqinisanga ubhaliso kwikholeji, eyunivesithi, okanye isikolo, kuya kunyulwa owesibini.
I-Scienceherb ayisoze ikucele ukuba uhlawule ukufaka isicelo semfundo.
I-Scienceherb ayisoze yakucela ukuba ubonelele ngolwazi lwekhadi letyala okanye inombolo yokhuseleko loluntu.
I-Scienceherb ayinakuze iqinisekise ngokuphumelela kwimali yokufunda.
Ukuba nayiphi na inkampani okanye iziko lifuna okanye lenza nayiphi na kwezi zinto zilapha ngasentla, elona thuba linokwenzeka lelokuba sisisikhalazo. Qiniseka ukuba unika ingxelo kwi-ofisi yakho yeenkonzo zabafundi.